Sandals Foundation na-enye iji weghachi Smith's Reef Snorkel Trail
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Ndị Turks na Caicos Breaking News » Sandals Foundation na-enye iji weghachi Smith's Reef Snorkel Trail
Caribbean • omenala • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • investments • News • Ịrụ ọrụ • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Ndị Turks na Caicos Breaking News • Akụkọ dị iche iche
Onyinye onyinye akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ iji weghachi ụzọ azụ snorkel
A ga-enyocha obodo dị iche iche, ụmụ akwụkwọ, na ndị ọbịa mba dị iche iche ka a na-enyocha ihe ndị dị egwu nke mmiri dị n'okpuru mmiri na Smith's Reef Snorkel Trail n'ihi ọrụ mmezigharị nke Sandals Foundation kwadoro.
Zọ ahụ na-amalite imegharị site na nnabata mmezigharị maka agụmakwụkwọ ka mma maka mmiri, ndụ. na ihe e ji ebi ndụ.
Ọrụ a dị mkpa na-eme ka nchedo ndụ mmiri dị egwu, nchekwa nke ndị snorkelers, na ibi ndụ nke ndị na-enweta ndụ site na iji ọwa mmiri ụgbọ mmiri dị nso.
Sandals Foundation nyere aka na US $ 30,000 maka mbọ a.
Na ncheta nke Obọchị Osimiri whichwa nke mere n’ọnwa a, ndị Turks na Caicos Reef Fund na mmekorita ya na Ngalaba Gburugburu Ebe Obibi na Akụkụ Osimiri ji mpako meghee ihe karịrị afọ 20 dị nso n’okporo mmiri mgbe emezigharịrị nwelite uru dị na US $ 30,000. site na Sandals Foundation.
Ọrụ mweghachi gụnyere nhicha na ịnọgide na-arụ ọrụ nke akara akara snorkel dị ugbu a, ntinye nke akara osimiri na akara akara gburugburu saịtị snorkel, iwebata mpaghara mpaghara igwu mmiri n'èzí mpaghara snorkel iji gbochie ndị snorke ịbanye na ọdụ ụgbọ mmiri na mberede, na inye akara ngosi. na ntuziaka ndị ọzọ na-ede akwụkwọ maka ụkpụrụ akwara.
Heidi Clarke, Onye isi oche na Sandals Foundation Obi dị m ụtọ ịhụ imeghe saịtị ahụ mara mma, na-ewetara ya ohere maka agụmakwụkwọ na-aga n'ihu na nyocha akụ na ụba.
"Trazọ 'ọhụrụ ihe ịrịba ama ga-atụkwasịkwara ọgaranya mmụta nke ụmụ akwụkwọ na ndị obodo na-enwe ike ịzụlite miri emi miri emi maka na nghọta nke otú ha onwe ha kwa pụrụ inye aka kpuchido mara mma eke akụ," kwuru Clarke.
Mmeghe saịtị ahụ ka dị ịrịba ama, Clarke gara n'ihu, dị ka isiokwu maka Daybọchị Osimiri Worldwa nke afọ a, “Jikọtara mkpa Oké Osimiri dị na ihe anyị maara nke ọma dị ka ndị mba Caribbean - ndụ anyị na ibi ndụ anyị. Oghere mmiri bụ akụkụ nke njirimara anyị dị ka mpaghara ma anyị nwere ọ happyụ dị ukwuu ịnweghachi ọmarịcha ebe a mara mma iji weghachite ihe eji enyere ndụ aka ka ọ bụghị naanị ichekwa usoro okike ndị dị ugbu a kamakwa ndụ na ibi ndụ nke ndị na-ekere òkè na akụ ya. ”
Alizee Zimmermann, Executive Director na Turks na Caicos Reef Fund gosipụtara ekele nye ntọala Sandal maka ọrụ mweghachi nke Smith's Reef.
“Smith’s Reef bụ ebe mara mma a na-asọpụrụ n’akụkụ mmiri nke ndị obodo na ndị ọbịa bịara ebe ahụ. Mgbalị mweghachi ahụ emeela ohere dị mma maka ndị snorkelers, na-eme ka ha mata ebe ọwa ụgbọ mmiri na-amalite site na mgbakwunye nke mpaghara mpaghara mmiri. Tụkwasị na nke a, mgbanaka snorkel n'onwe ya na-eje ozi iji gbochie ndị mmadụ na mpaghara ndị na-emighị emi, nke na-emebi emebi nke akuku mmiri, na-echekwa coral anyị na-adịghị ike mgbe niile na-ewere snorkeler na njem nleta site na ntinye nke akara akara mmiri. Ihe ịrịba ama ndị dị n'ụsọ osimiri na map ndị na-adịghị mmiri mmiri ma a pụrụ imegharị ihe ga-eme ka nke a bụrụ ihe na-atọ ụtọ, ahụmahụ na ihe ncheta maka mmadụ niile. ”
Ndị Turks & Caicos bụ ebe obibi nke atọ kachasị ukwuu na mgbochi ụwa na ihe karịrị otu nde ndị njem na-aga agwaetiti ahụ kwa afọ iji chọpụta ihe ịtụnanya dị na mmiri.
N'ikwu okwu na mkpumkpu mmeghe nke okporo ụzọ Trail gburu n'okpuru usoro iwu nchekwa siri ike, onye isi njikwa na Beads Turks na Caicos, James McAnally beamed na, “Dika ụlọ ọrụ njem nlegharị anya nke agwaetiti ahụ na-aga n'ihu na-aga elu, ebe a ga-emepe snorkel ọhụrụ ga-abụ mgbakwunye nnabata na njem mmiri ndị na-achọ ya. ”
McAnally gbakwunyere na ndị ọbịa na Bekee Turks na Caicos Resorts, "a ga-agba ume ka ha nyochaa ụzọ snorkel site na ị jidere mmiri ha na ebe a na-eme njem na Aqua Center na ịga ije dị mkpirikpi n'akụkụ osimiri gaa na saịtị ahụ bụkwa nke mepere ọha na eze."
A na-eyi egwu coral n'akụkụ niile nke Caribbean na ebe okpomọkụ Atlantic. Ndagwurugwu mmiri dị nso bụ akụ bara uru nke ukwuu ka ha na-enye ndị ọbịa ohere ohere iji nwee ike ịnweta ma mụta banyere usoro okike dị ịtụnanya. Ndozigharị nke Smith's Reef Snorkel Trail malitere na ngwụcha 2019 mana enwere ọtụtụ ndọghachi azụ n'ihi mmalite nke ọrịa COVID-19.
Ihe oru ngo a gara n'ihu na mmekorita nke di ogologo n’etiti ndi Turks na Caicos Reef Fund na Sandals Foundation ndi kari otutu afo mejuputara otutu ihe omume ka ha chebe nchekwa mmiri nke agwaetiti a.